Etu esi emechi taabụ na Safari | Akụkọ akụrụngwa
Mgbe anyị na-abanye na ịntanetị na-achọ ụfọdụ ozi ma anyị chọrọ iche ya na ibe weebụ ndị ọzọ, ihe kachasị mma bụ na anyị ji ezigbo aka nke mepere windo mechaa ọrụ anyị na ihe nchọgharị ahụ, na-enweghị ike icheta nke dị anyị ezigbo mkpa. Mana nke ahụ bụ okwu ọzọ na ihe nchọgharị Google, Chrome, na-edozi ngwa ngwa site na ikpokọta taabụ niile dịka ha si malite.
Taa, anyị ga-ekwu maka nchọgharị Safari maka OS X. Safari maka Mac bụ ihe nchọgharị kachasị mma anyị nwere ike ịchọta n'elu ikpo okwu a Ebe ọ bụ na ọ kachasị nke kachasị iji nwee ike ịnweta arụmọrụ batrị kachasị mma yana njiri akụ ga-ekwe omume na-enweghị kọmputa anyị na-ata ahụhụ n'oge usoro ahụ. Na Safari anyị nwere ike ịnweta windo dị mma na-emeghe na-enweghị kọmputa anyị (dabere na ihe atụ ahụ) na-ewe iwe.
Ihe kachasị bụ usoro ọgwụgwọ maka mechie taabụ niile anyị mepere na Safari bụ imechi ihe nchọgharị ma mepee ya. Mana maka nke a anyị ga-eji òké ahụ ọzọ wee kewaa mkpịsị aka na keyboard, akụkụ nke mgbe m na-ede ma na-achọ ozi na-ewute m nke ukwuu. N'ụzọ dị mma, anyị nwere ike imechi taabụ ndị anyị mepere emepe na ihe nchọgharị anyị na-enweghị imechi ihe nchọgharị ahụ ma ọ bụ jiri òké na ngwaọrụ anyị.
Ihe kachasị ọsọ na-enweghị imechi ihe nchọgharị ka ị mepee ma gaa n'ihu na-eme nchọgharị ka ị pịa Nchikota igodo CMD + W. Pịa ọ bụla anyị mere na mkpokọta igodo a ga-emechi windo nchọgharị, kpọmkwem nke anyị nọ na ya, ka anyị wee nwee ike ihicha ngwa ngwa na-enweghị imechi na imeghe Safari. N'ụzọ dị iche, ọ bụrụ na anyị chọrọ imechi Safari ka anyị mepee ya ma emesịa, anyị nwere ike pịa mkpokọta isi CMD + Q. Nchikota a nwekwara ike iji mechie ngwa ọ bụla anyị mepere na Mac anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Etu esi emechi taabụ na Safari ngwa ngwa